Bitcoin လေယာဉ်ပျက်ကျခြင်းနှင့် Ethereum ပူဖောင်း။ ပြီးနောက်?
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ Bitcoin ဟာပျက်ကျခဲ့ပါတယ်။
(BTC) ပြိုကျခဲ့သည်။ လေယာဉ်ပျက်ကျခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရုတ်တရက်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောလှုပ်ရှားမှုကို ၂၅% ကျဆင်းစေသည်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားသောတစ်ခုတည်းသောဂရပ်ဖစ်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်က Bitcoin သည်မတ်လအစောပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်Aprilပြီလအစောပိုင်းတွင်ပျက်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူကနှစ်ခုလုံးကိုဆွဲယူနေစဉ်ဂရပ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းခွင့်ပြုသည်။
Bitcoin ဇယား - မကြာသေးမီကပျက်ကွက်မှုနှစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ယုံကြည်သူများအနေဖြင့် Bitcoin လမ်းကြောင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၁ သန်းအပေါ်အတိုချုပ်သာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေအတွက်တော့ရှင်းပါတယ်။
ပထမ ဦး စွာဒီမှာ
hodler ၏ 100% ထက်နည်းသောမည်သူမဆိုအတွက်ဂရပ်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး Bitcoin crash
ဒါကအရင်စန်း၊။ သိသာထင်ရှားတဲ့, Bitcoin နှင့် ethereum ဆိတ်ကွယ်ရာလာကြပြီ။
နောက်ဆုံး Bitcoin ပျက်ကျမှု၏ဂရပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဂရုစိုက်သင့်သည်။
ဒီနေ့ရဲ့ Bitcoin ဇယားသည်အလွန်ရင်းနှီးနေပါတယ်
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရိုးနည်းစနစ်တစ်ခုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတာတစ်ခုရှိရင်၊ အထူးသဖြင့်ကန ဦး ဆီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံများကိုမြည်လိမ့်မယ်။ bitcoin အတွက်မြင့်တက်ခြင်း, 2017 ပုံစံသူ့ဟာသူထပ်ခါတလဲလဲ။ ဒီဂရပ်ဖစ်ကိုလည်းထပ်ထည့်နိုင်သည်။
ဒေါင်လိုက် ၂ ဆင့်တောင်မှတောင်ထိပ်၏အသုံးဝင်သောညွှန်ကိန်းဖြစ်သည်။
ဒီဒေါင်လိုက်အဆင့်နှစ်ခုစလုံးဟာထိပ်ဆုံးအတွက်အသုံးဝင်သောညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့အတွက်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကဒီဗီဒီယိုကိုမြေပုံထုတ်ဖို့လိုသေးတယ်ဦး ဆားဆားအစရှိသည်ဖြင့်
ငါ့အတွက်၊ crypto သည်တသမတ်တည်းနွားစျေးကွက် မှနေ၍ တစ်သမတ်တည်းမရှိသောဈေးကွက်သို့သွားသည်ဟူသောခံစားမှုတစ်ခုရှိသည်။ အမြှုပ်များမှတစ်ဆင့်နောက်ခံလမ်းကြောင်းသို့မသွားနိုင်ပါ။ အခြားသူတွေအတွက် Ethereum နဲ့ Bitcoin ကိုစွန့်ခွာပြီးတဲ့နောက်ငါကစားခဲ့တဲ့
DeFi (ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး) က ၁၀x ဂိမ်းကနေမတည်ငြိမ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုကစားနိုင်ခဲ့ပြီး NFTs (non-fungible tokens) တွေကနေရဲ့ရက်သတ္တပတ်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ယင်း၏ပထမ ဦး ဆုံးစန်း, တွေဆီကနေနှင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုသံသရာကြုံတွေ့ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ရပ်တည်ချက် - cryptocurrencies, DeFi, NFT နှင့်အခြားလက်ရှိသို့မဟုတ်မမွေးသေးသောအမျိုးအစားအားလုံးသည်မျိုးဆက်သစ်နွားလားအတွက် - မပြောင်းလဲပါ၊ သို့သော် bitcoin သည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့ပါက crypto သံသရာ၏ဝက်ဝံအစိတ်အပိုင်းကိုခံစားရလိမ့်မည် တစ်ချိန်ကထက်ပိုပြီးခံခဲ့သည်။
Bitcoin ပြန်ပေါ်လာလျှင်ကောင်းကင်ကကန့်သတ်ချက်နောက်တစ်ခါထပ်မံမြင့်တက်လာမယ့် DeFi မှာငါထပ်ကစား ဦး မည်ဆိုပါကရာခိုင်နှုန်းများပြားခြင်းနှင့်ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်ပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့နေရာယူထားပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာအရမ်းအံ့သြသွားတယ်။
Mark Twain ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ဟာစည်းချက်ထက်ပိုပြီးလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ —— Clem Chambers သည်ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏စီအီးအိုဖြစ်ပြီးစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်ဆုရရှိသူ ၁၀၁ ခုနှင့်စာရေးသူဖြစ်သည်။ ကုန်သည်များသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် State Street UK ၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်းဆုများမှစီးပွားရေးစျေးကွက်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်အမျိုးအစားတွင်တစ်နှစ်တာ၏သတင်းစာဆရာဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
2021-05-13 21:24:08 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလေကြောင်းလိုင်းများသည်သေလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်မှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်ဖေဖော်ဝါရီလတွင် WHO က Covid ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါအဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးသည်မိမိကိုယ်ကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးလေကြောင်းခရီးစဉ်သည်လုံးဝရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ လေယာဉ် ၁၀ စင်းအနက်ကိုးခုကိုအခြေခံထားသည်။ နှင့်လေဆိပ်အများစ...
2021-05-13 20:05:24 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ Twitter ၌မျှဝေပါ Linkedin ပြောင်းဖူး moneygettyCorn စျေးနှုန်းသည် ၇ နှစ်အတွင်းစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည် နှင့် Ms. Market သည် M2 အစွန်အဖျားကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ သူတို့က 10 နှစ်ပိုမိုမြင့်မားအထွက်နှုန်းမှမျက်စိကွယ်မျက်စိလှည့်နိုင်ဘူး။ ယခုမူကား JP တကယ်ထောင့်သို့ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်...
2021-05-12 01:30:35 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
TwitterShare တွင် FacebookShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်မျှဝေပါရိုးရာအစဉ်အဆက်ရန်ပုံငွေများကိုတက်ကြွစွာစီမံခန့်ခွဲသော T. Rowe Price Group ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအကြီးအကဲ Linkedin Stephon Jackson . . . [+] Photographer: Rosem Morton / Bloomberg © 2020 Bloomberg Finance LP အစုရှယ်ယာကောက်ယူ...
ဒေါ်လာ ၄.၅ ထရီလီယံရှိတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံပြင်ဆင်ခြင်း - တစ်ခုခုမှားယွင်းနေတယ်
2021-05-11 08:31:52 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
Facebook ရှိမျှဝေရန် TwitterShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin ၏အိမ်တိုးတက်မှုစီမံကိန်းတွင်စတင်ပါ။ Getty“ သင်၌ရှိသမျှအားလုံးသည်သံတူဖြစ်သည်ဆိုပါစို့ပြeveryနာတိုင်းသည်လက်သည်းနှင့်တူသည်။ ” Mark Twain (အကျော်ကြားဆုံး) "အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများ" ၏ပုံသဏ္Likeာန်သည်ပထမဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။ အမျိုးသားရေးနှင့်က...
2021-05-11 07:11:37 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
Linkflin ရှိ TwitterShare တွင် FacebookShare တွင်မျှဝေခြင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Netflix ၏ရှယ်ယာများသည်ရက် ၂၀၀ အတွင်းရွေ့လျားပျမ်းမျှဒေါ်လာ ၅၁၄. ၁၁ အောက်သို့ကျဆင်းသွားပြီးလက်ဖြင့်ရှယ်ယာတစ်စုလျှင်ဒေါ်လာ ၅၀၃. ၆၀ အထိပြောင်းလဲသွားသည်။ ရှယ်ယာ ၁၀ ခုသည်သူတို့၏ရက်ပေါင်း ၂၀၀ ရွေ့လျားသည့်ပျမ်းမျှရှယ်ယာများအောက်တွင်...
Halliburton စတော့ရှယ်ယာအလွန် oversold လာပြီဖြစ်ပါတယ်
2021-05-11 07:05:25 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
Linkedin တွင် FacebookShare တွင်မျှဝေပါ LinkShin တွင် ShareShare တွင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအရောင်းအ ၀ ယ်၌ Halliburton ၏ရှယ်ယာများသည်အလွန်များပြားသောပိုင်နက်များသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးတစ် ဦး လျှင်ရှယ်ယာတစ်ဒေါ်လာ ၁၈. ၃၅ ဒေါ်လာအထိကျဆင်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထပ်မံ၍ ရောင်းဝယ်သောနယ်မြေကိုသတ်မှတ်ထားသောသုညမှ ၁၀၀ အတွင်း...
2021-05-11 04:44:19 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ Twitter ပေါ်မျှဝေပါ Linkedin တွင်ကနေဒါရှိလယ်ယာကဏ္ field တွင်ပြောင်းဖူးပေါက်သည်။ ဓာတ်ပုံဆရာ - Shannon VanRaes / Bloomberg © 2020 Bloomberg Finance LM သူတို့ကိုသင်တတ်နိုင်ဆဲပြောင်းဖူးများများသိုလှောင်ထားခြင်း။ ဘရာဇီးတွင်အလွန်နည်းပါးသောရိတ်သိမ်းမှုနှင့်ယခုနှစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မိ...
2021-05-10 15:40:24 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
Linkedin တွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင် DSh သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအညွှန်းတွင်ရထားလမ်း၊ လေကြောင်းလိုင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ခြင်းကုမ္ပဏီများပါဝင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အမြင့်ဆုံးသည် ၁၅. ၉၂၃. ၀၆ ဖြစ်ပြီးသောကြာနေ့မေလ ၇ ရက်တွင်သတ်မှတ်သည်။ တစ်နေ့နေ့အမြင့်ဆု...
ဤ“ ခွဲဝေမှုပေါင်းစည်းခြင်း” သည် ၈% + (၀ ယ်ယူ၊ ကိုင်၊ ရောင်းမည်လော) ဖြစ်လိမ့်မည်။
2021-05-10 14:11:28 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
Linkedin တွင် FacebookShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင် ShareShare on Facebook တွင်မျှဝေပါသမိုင်းတွင်အအောင်မြင်ဆုံးတံခါးပိတ်ရန်ပုံငွေ (CEFs) မှ Getty သုံးခုအတူတကွအလုပ်လုပ်သောစီးပွားရေးသမားများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်ရန်ပုံငွေများနှင့်သူတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲသောကုမ္ပဏီအတွက်မကြုံစဖူးသောအရာတစ်ခုပြီးမြောက်ခဲ...
2021-05-10 08:47:53 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
Facebook ပေါ်မျှဝေခြင်း Twittered တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်အကောင်းဆုံးအဆိုးဆုံး ButtonsgettyExchange ကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေများ (ETFs) ကို ၀ ယ်ရန်လွယ်ကူသည်။ စတော့ရှယ်ယာများ၊ ငွေချေးစာချုပ်များ၊ ကုန်စည်များ၊ ကြီးထွားမှု၊ တန်ဖိုး၊ ကဏ္sectorsများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အထွက်နှုန်းမြင့်မားရန် ETF တစ်ခုရှိသည...
ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအကြားပစ္စည်း: နှောင်ကြိုး ESG ပေါင်းစည်းမှုကိုကြည့်
2021-05-10 03:12:35 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
Facebook တွင်မျှဝေခြင်း Twittered တွင်မျှဝေပါ Linkedin ၏ Global Financial Marketsgetty ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကိုအာရုံစူးစိုက်သောထုတ်ပေးသူများသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများနှင့်ပတ်သတ်သောအချက်အလက်မရှိခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုစံသတ်မ...
ယခုဝယ်ယူရန် contrarian မြတ်များထိတ် 5
2021-05-09 14:47:10 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
Twitter ပေါ်မျှဝေပါ TwitterShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်အပြာရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်အစိမ်းရောင်ဒေါ်လာသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်လူအများစုသည်အမြင့်ဆုံးသို့ပိုမိုနီးကပ်စွာ ၀ ယ ်၍ သိုလှောင်ဆန်များကိုအနိမ့်ဖြင့်ရောင်းကြသည်။ စျေးကွက်များသည်အချိန်တိုင်းအမြင့်ဆုံးသို့ရောက်လုနီးပြီ ဖြစ်၍ ရင်းနှီး...
Iron Mountain ၏ရှယ်ယာသည် ၆% ပြန်ရရှိသည်
2021-05-08 05:47:43 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
LinkedinFriday ရှိ TwitterShare တွင် FacebookShare တွင်ဝေမျှပါ၊ Iron Mountain ၏ရှယ်ယာသည်၎င်း၏သုံးလတစ်ကြိမ်အမြတ်အစွန်း (နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၂. ၄၇၄ ဒေါ်လာဖြင့်) ၆% အထက်သို့ကျဆင်းသွားပြီးစတော့ရှယ်ယာသည်တစ်နေ့လျှင် ၄၀. ၆၇ ဒေါ်လာအထိကျဆင်းသွားသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ခွဲဝေခွဲဝေမှုသည်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသည်...
2021-05-08 05:35:36 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
Twitter ပေါ်တင်ပါ၊ Twitter တွင်မျှဝေပါ Linkedin အမျိုးသမီးတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော Getty အဝတ်အစားများကိုင်ဆောင်ထားသည့်လက်ဝယ်လက်လီအရောင်းဆိုင်ရှိလူတိုင်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော bandwagon ကိုခုန်ကျော်ပြီးရည်မှန်းချက်ကြီးသောမစ်ရှင်များ၊ အလားတူစွာစားသုံးသူစကြ ၀ theာသည်ရေရှည်...
2021-05-06 20:04:31 | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ TwitterShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်ရှယ်ယာ ၈. ၀၆ သန်းရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ပြီးနောက် Farfetch Ltd. (FTCH, Financial) ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်စတိဗ်မင်ဒယ် (Trades, Portfolio) ကတည်ထောင်ခဲ့သော Led Pine Capital သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော hedge ရန်ပုံငွေက၎င်း၏ရင်းနှီးမြုပ်နှ...